DHAGAYSO+COD ?Maxba kama jiraan hadalkii Garaadku uu sheegay, Laasqorayna dakad ayaa laga qodayaa? Xildhibaan Axmed Cali Xaashi. – Radio Daljir
Oktoobar 4, 2012 5:17 b 0
Laasqoray, Oct, 04 ? Xildhibaan Axmed Cali Xaashi oo horay u ahaan-jiray guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa isagoo ku sugan Laasqoray waxaaa uu beeniyay hadal uu dhawaan warbaahinta ka sheegay Garaad C/llaahi Cali Ciid oo uu ku cambaaraynayay hawlgalka dakada Laasqoray oo garaadku ku tilmaamay arrin maafiyo ah.
Xildhibaan Axmed Cali Xaashi waxaa uu sheegay Laasqoray inuu ku sugan-yahay isagu, waxaana uu hadalkiisa raaciyay arrimihii dakadu inay marayaan meel aad u wanaagsan oo gabo-gabo ah.
?Runtii hadal laga naxo ayuu ahaa, hadalkii Garaadka kasoo yeeray, mana ahan arrin lagu farxo, maxaa yeelay dakada Laasqoray waa arrin ummada Soomaaliyeed oo dhan wax-tar u ah, waa iftiin ummada u baxay, in maafiyo lagu tilmaamo dad masuuliyiin ahna waa wax aan wanaagsanayn? sidaasina waxaa yiri xildhibaan Axmed Cali Xaashi.
Hadalkaan kasoo yeeray xildhibaan Axmed Cali Xaashi ayaa kusoo beegmaya xilli waraysi uu siiyay Daljir Garaad C/llaahi Cali Ciid uu ku cambaareeyay hawlgalka lagu dakada Laasqoray,? uuna ku tilmaamay arrin maafiyo ay ka dambayso.